Mayelana nathi - Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd.
I-Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. ingumkhiqizi wobuchwepheshe wocwaningo lwe-ultrasonic, ukuthuthukiswa kwamandla amakhulu we-transducer nokukhiqizwa eChina. Imikhiqizo yethu eyinhloko i-transducer, i-ultrasonic power supply, i-ultrasonic metal welder, izingxenye ze-antenna zensimbi ye-ultrasonic njalonjalo. Le mikhiqizo isetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene, njenge-plastic welding, i-welding yensimbi, ukubekwa uphawu okungekona okwelukiwe nokusika nokunye. Kusukela ekusungulweni kweQianrong Equipment, inkampani ibilokhu igxile kuzidingo zamakhasimende. Ngenkathi sihlola imakethe yasekhaya eChina, sikhombisa nobuchwepheshe benkampani yethu be-ultrasonic emhlabeni. Ikhwalithi nokusebenza kwayo kuyaziwa embonini.
Ukunamathela "ekugxileni ekusetshenzisweni kwe-ultrasonic, ngokuthembekile ukuzuza amakhasimende, ukuwina idumela lekhwalithi" inhloso yokuthuthuka, ube ngumhlinzeki ohola phambili emhlabeni wezinto eziyinhloko ze-ultrasonic, ngezinga lethu lobungcweti nemizamo engapheli, imikhiqizo yekhwalithi yamakhasimende ku ukuthuthukiswa komkhakha ukudala inzuzo enkulu kakhulu.
I-Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. isebenza ebhizinisini lokuthumela ngaphandle lama-transducers e-ultrasonic kanye ne-ultrasonic Welding Machine emhlabeni jikelele emazweni angaphezu kwama-40.
Njengomthumeli omkhulu wezinto zobuchwepheshe ze-ultrasonic, i-Qsonic inolwazi olunzulu lomkhiqizo nolwazi oluphambili, ngakho-ke siyaqiniseka ukuthi singahlangabezana nezidingo zakho. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo yethu inengqondo kakhulu ngentengo nekhwalithi ephezulu, ukuze amakhasimende ethu akwazi ukugcina inzuzo yokuncintisana.
Ngokuthuthukiswa kwenkampani, sineqembu elihle kakhulu. Asinikeli ngemikhiqizo ejwayelekile kuphela, kodwa futhi nezinto ezenziwe ngezifiso ngokususelwa kwimidwebo eningiliziwe noma amasampula.
I-QRsonic inikeza izinsizakalo eziningi ze-OEM kumakhasimende ayo. Ilogo yekhasimende ingaphrintwa kumshini we-ultrasonic transducer nemishini ye-ultrasonic.
Silangazelela ngobuqotho ithuba lokukusiza futhi ube ngumlingani wakho esikhathini esizayo esiseduze. Masisebenze ngokubambisana ukudala inzuzo enenzuzo enkulu ekuthuthukiseni imboni ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme.